China zvishongedzo zvikamu fekitori uye vagadziri | Simbi & Injiniya
Isu (M & E) tiri nyanzvi yekugadzira yesimbi yakarukwa & simbi yekushongedza zvikamu. pamwe nekumberi manejimendi uye zvinehunyanzvi musika-wakanangana nefilosofi inowana kusimudzira kwakanaka maererano nemhando yepamusoro zvigadzirwa uye mukurumbira wakanaka.
M & E yekushongedza simbi uye simbi yekukanda kana zvigadzirwa zvekugadzira zvakagadzirwa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa, zvinogadzirwa zvese neyechinyakare mushandi mashandiro uye nenzira yakarasika ye wax nzira iyo inogona kutipa chivimbo chekugadzira yakakura kwazvo mhando yemhando yepamusoro, zvakagadzirwa zvakagadzirwa zvinoda izvo vatengi vedu vanoda.
M & E yekushongedza simbi zvinhu zvine masitayera akasiyana mumazana anopfuura mazana egrey iron HT-20, Amreican standard class 20 iyo inogona kusunganidzwa ne cast cast iron maelekodhi, zvishongo zvesimbi zvigadzirwa zvine akateedzana masitaira senge maruva, mashizha, cap, makora, mipumburu uye mapaneru… .. ane mazana emasayizi mune yakaderera kabhoni simbi kirasi 25-35 iyo inogona kusunganidzwa zviri nyore nematare esimbi.
M & E yekushongedza simbi uye simbi zvinhu zvakaendeswa kunze kwenyika kuEurope.north America nepakati kumabvazuva nyika nezvimwe .. kwemakore mazhinji. Ivo vanogutsikana kwazvo nevatengi.
Tinopa basa rakanakisa
Nomutsa verenga katarogu yedu zvakanyatsonaka uye titizivise zvakadzama masitaera. Masayizi uye huwandu hwaunoda. Chero bedzi iwe uri mune yedu bhizinesi mutsara, isu tichakuchengeta iwe uchipihwa neazvino makatalogu, mapikicha, ruzivo rutsva rwatakagadzira uye tinokugamuchira iwe kuti utitumire isu chero matsva masiketi kana madhirowa. Isu tinogamuchira chero madhiragi makuru kana madiki, ane kugona kwekugadzira kwakakura kune maodha uye tinzwisise necsssity yemadiki madhizaini. Kamwe chero odha yasimbiswa, izvo zvinotumirwa zvichaitwa nenguva.
Isu tinodada neyedu M & E zvigadzirwa zvinotengesa mushe pasirese nekubatana kwepedyo kubva kune vatengi vedu pasirese .Tinokuvimbisa iwe kuti uchagutsikana nezvakanaka zvigadzirwa zvedu, basa rakanakisa uye mutengo wakanakisa.
Unogamuchirwa kuti upe chero mazano uye mazano matsva
Pashure: Plumbing & Drainage Zvigadzirwa
Zvadaro: Kukura Kukuru Castings
Yakagadzirwa Iron Ornamental Zvikamu